Myanmar Military Junta trying to createanew Anti-Muslim Riots | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« References for Myanmar Muslims who wish to write anything about suffering of Non-Rohingya Myanmar Muslims in Myanmar.
Flower Storm ပန်းပွင့်မုန်တိုင်း »
This entry was posted on May 20, 2022 at 6:15 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Myanmar Military Junta trying to createanew Anti-Muslim Riots”
May 22, 2022 at 4:47 am | Reply
ခေါင်းဖြူဌေးအောင် တစ်စခန်းပြန်ထလာလာတော့ စစ်အုပ်စု ယခင့်ယခင်ကတည်းက အသုံးချခဲ့တဲ့အကွက်တွေ ပြန်မြင်ယောင်မိတယ်။ စစ်အုပ်စုမှာ ရှေ့မျက်နှာထွက်ပြရတဲ့ အကြမ်းသမားနဲ့ အနုသမားတွေရှိတယ်။ ဥပမာပြောရရင် သိန်းစိန်တက်လာတဲ့အချိန် အကြမ်းတွေ စသုံးတာ။ အိုင်ဒီဖော်သူရော မဖော်သူရောပေါ့။ ၂၀၁၂ ၀န်းကျင် ဖေ့ဘုတ်ကျင်လည်ဖူးသူဆိုရင် မောင်ကာဠုတို့ အစ္စလာမ်ဗိုင်းရပ်စ်တို့ ကြားဖူးမှာပေါ့။ ရိုဟင်ဂျာမုန်းတီးရေး အခြေပြုရာကနေ အစ္စလာမ်မုန်းတီးရေး လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြတာ။ အိုင်ဒီဖော်သူတွေ သုံးတာကတော့ ဝီraသူတို့ ဘုန်းကြီးတစ်သိုက်။ သူတို့က အကြမ်းအုပ်စု။ အနုနည်းနဲ့ မှိုင်းတိုက်တာကတော့ သိန်းစိန် ရဲထွတ်တို့ သမ္မတရုံး ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ တစ်ဖက်က အကြမ်းနည်းနဲ့ မှိုင်းတိုက်သမျှ စစ်၀တ်စုံချွတ်အစိုးရက တရား၀င် မီးစာတင်ပေးရတာ။
ဒီလိုနဲ့ နေမျိုးဝေ ခက်ထန် အစရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစွန်းရောက်သမားတွေ သုံးတယ်။ မွတ်စလင်ထဲကလူတွေကိုလည်း သုံးတယ်။ လူတိုင်းကြားဖူးမယ်ထင်တယ် ဒိုင်းမွန်းရွှေကြည်တို့ကတော့ ထိပ်ဆုံးကပေါ့။ အနောက်အုပ်စုက အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှုခေါင်းစဉ်တပ်လာတော့ ကိုး6ကိုးကနေ မဘသဆိုပြီး အထင်ကရဘုန်းကြီးတွေနဲ့ လှည့်ရွှေ့တယ်။ အသုံးတော်ခံရှေ့ထွက်တွေ အများကြီးပါပဲ။ နာမည်တွေ အကုန်တော့ မရွတ်တော့ဘူး။
အခုအောင်ဆန်းစုကြည်အလွန် အာဏာသိမ်းခေတ်ကျပြန်တော့လည်း ဇော်မင်းထွန်းတို့ ဘာတို့ပေါ့။ ဌေးအောင်ကိုလည်း လိုသလိုသုံးတယ်။ အခုသူ့အလှည့် ပြန်ကျတော့ ခေါင်းဖြူဌေးအောင် ရှေ့ပြန်ထွက်လာတယ်။ သေချာပြန်တွေးကြည့်ရင် ဘာမှထူးဆန်းမနေဘူး။သူတို့ဘာကြောင့်ရှေ့ထွက်ရသလဲဆိုတဲ့ အာဂျင်ဒါကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး အဆင်ပြေသလို လှုပ်ရှားသွားဖို့ပဲလိုတာ။ ဌေးအောင်တို့ ဇော်မင်းထွန်းတို့ အလွန် မင်းအောင်လှိုင်အလွန်မှာလည်း ဘယ်တော့မှ နောက်ဆုတ်ပေးဖို့ မစဉ်းစားတဲ့ စစ်အုပ်စုဟာ ရှေ့ထွက်ကောင် အနု အကြမ်းတွေကို ရွေးပြီး စင်တင်နေဦးမှာပဲ။ နေမျိုးဝေတို့ ၀ရသတို့ သိမ်းခံလိုက်ရပြီ။ သတဂလည်း ဘောင်မ၀င်တော့ဘူးဆိုတော့ တနည်းမရ နောက်တနည်းလှည့်သုံးတာပါ။
ပြည်သူတွေ မအကြတော့ဘူး။ စစ်အုပ်စု ထပ်ပြီး လည် မလာအောင် အမြစ်ဖြုတ်ဖို့ပဲရယ် အတွေးအခေါ်တော်လှန်ရေးလုပ်ဖို့ရယ်ပဲ လိုတော့တယ်။